Ciidanka Amaanka Soomaliland Oo Gacanta Ku Dhigay Koox Lala Xidhiidhiyay Argagixisada Kadib Hawlgal Ay Ka Fuliyeen Caawa Hargeysa | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN) Ciidanka amaanka Somaliland ayaa caawa caweyskii hawlagl balaadhan oo ay ka fuliyeen Huteelka City Center ee badhatamaha magaalada Hargeysa ka qabtay koox looga shakiyay inay qorshaynayeen hawlgalo ka dhan ah nabadgelyada Somaliland. Sidaana waxa shebekada
wararka ee Araweelonews u xaqiijiyay saraakiil ka tirsan ciidanka Bilayska.
Kooxda la qabtay ayaa tiradooda lagu sheegay 6 Nin, kuwaas oo deganaa huteelkaa. Ka hor intii aanay ciidanka amaanku hawlgal ay caweyskii caawa qaadeen ku qabqaban kooxdaa.
Dad goob joog ah ayaa u sheegay Araweelonews inay arkayeen ciidanka oo qiyaastii sagaalkii fiidnimo, iyagoo wata saddex gaadhi dad baddan ka qaaday Huteelkaa, iyadoo qaarkood la lugaysiiyay, balse waxay dadka goobta joogay sheegeen in dad baddan oo ciidanku halkaa ka qabteen soo daayeen inyar ka dib. Kadib markii su’aalo la weydiiyay. Laakiin tirada kooxda sida rasmiga ah u xidheen Bilaysku ayaa lagu sheegay inay yihiin 6 Nin oo ka mid ahaa dadkii huteelkaa laga qabtay.
Wixii kasoo kordha kala soco Araweelonews